Fandrika 20 Ny ankamaroan'ny olona latsaka amin'ny ainy - Blog
Fandrika 20 Ny ankamaroan'ny olona latsaka amin'ny ainy
Dia lavitra ny fiainana. Izay no nolazaina taminay. Ary marina amin'ny lafiny maro. Izy io dia misy fiandohana, eo anelanelany ary fiafarany. Marina ny fiainana rehetra.
Na izany aza, ny ankamaroan'ny dia dia hisy fandrika eny an-dalana. Fahasarotana tsy hitantsika mialoha.
Ary misy fandrika ny dia. Zavatra mety hianjady amintsika mandritra ny dia ataontsika.
ny fomba ilazana amin'olona fa tianao izy
Iray amin'ireo loza ateraky ny fandrika ny tsy fahitana azy ireo. Afenina izy ireo. Amin'ny fotoana ahitanao azy ireo dia tara loatra. Tsy misy tsangambato milaza hoe 'Mandria eo alohan'izay.' Ary satria tsy mahita ny vela-pandrika isika dia tsy miomana amin'izany.
Ahoana anefa raha mety ampitandremana ianao momba ireo fandrika manamorona ny dian'ny fiainanao?
Tsy manampy ve ny fahalalana ireo izay sendra anao eny an-dalana mialoha ny fotoana?
Ireto misy fandrika 20 latsaka amin'ny fiainany. Ireto fandrika ireto dia fahita matetika ary saika manerana izao rehetra izao. Azo antoka fa hihatra aminao sy amiko koa izy ireo.
Araka ny fitenenana, 'Foreararned is forearmed.' Ka aleo aloha misaron-tànana, sa tsy izany?
1. Ny fandriky ny filalaovana ny niharam-boina.
Isika rehetra dia manana zavatra hitranga amintsika izay tsy irintsika. Indraindray isika iharan'ny herisetra, ratra, fampijaliana, na fanararaotana. Tsy maninona ny miantso azy hoe inona izany.
Saingy manana fironana hahita ny tenantsika ho toy ny olona iharam-boina isika, rehefa tena mipetraka eo amintsika ny tsiny.
Ny fahazoana ny gripa eo alohan'ny dinidinika momba ny asa dia mampijaly anao amin'ny toe-javatra tsy ampoizina. Voaroaka noho ny ady hevitra amin'ny lehibenao ianao.
Tokony hianatra hamantatra ireo zavatra mitranga amintsika izay tsy fahadisoantsika isika ary tsy afaka misoroka.
Tokony hanao izany koa isika manaiky andraikitra rehefa mitondra zavatra eo amintsika fa tsy mandray a toe-tsaina iharam-boina .
2. Ny fandriky ny valifaty.
Tahaka ny nahavoa antsika rehetra tamin'ny toe-javatra indraindray, dia hisy ny fotoana nahavitanay ny zavatra ho antsika avy amin'ny iray hafa.
Rehefa mitranga izany dia mety misy fiara mandresy lahatra handamina ny isa. Mamaly ny ratsy amin'ny ratsy. Tokony hanoherana an'ity fiara ity amin'ny herintsika rehetra isika.
Ny valifaty dia tsy hoe diso fotsiny amin'ny azy fa isika ihany koa manisy ratsy ny tenantsika rehefa mahatonga ny ratsy eo amin'ny fiainan'ny olon-kafa isika.
Tsy midika akory izany hoe tsy tokony hikatsaka isika ny rariny rehefa nisy ny heloka vita, na ny hetsika manimba hafa natao. Saingy tokony hametraka ny fahamarinana eo an-tanan'ireo izay omena hery isika amin'izany.
Na dia tsy manao tsara foana aza izy ireo.
indraindray tsy rariny loatra ny fiainana . Saingy tsy manana fahefana na zontsika handray an-tànana ny raharaha isika. Antsoin'izy ireo hoe 'lalànan'ny ala' satria izany no atao any anaty ala. Raha tsy mipetraka any anaty ala ianao dia tokony hisoroka io fandrika io.
Araka ny efa hitan'ny olona iray taloha:
Ny valifaty dia toy ny fisotroana poizina ny tenanao ary manantena ny ho faty ilay olon-kafa.
Izy io koa dia toy ny mandoro tetezana izay tsy maintsy hiampitan'ny tenantsika.
3. Ny fandriky ny mangidy.
Tsy fanontaniana raha manana zavatra mangidy ianao - mety manao izany ianao. Saika manao izany ny olon-drehetra. Izahay rehetra dia efa notsaboin'ny olona ratsy tamin'ny fotoana sasany noho ny antony sasany.
Fa ny vita dia vita. Ny fanontaniana fotsiny dia hoe afaka mamela azy io ianao fa tsy ho sosotra amin'izany. Tsy azo ihodivirana ny fitsaboana tsy rariny - mangidy tsy voatery.
Ny mangidy dia hanampy enta-mavesatra fanampiny amin'ny fiainanao, izay mety efa mavesatra ampy. Aza manampy an'izany. Esory ny sasany amin'ny enta-mavesatrao amin'ny tsy fahatezerana.
4. Ny fandriky ny fizakan-tena.
Isika rehetra dia mila mitandrina ny tenantsika, fa misy ny fitadiavam-bola sy ny fitehirizan-tena ary ny fiheverana ny tena.
Raha tsy zanaka intsony isika dia antenaina fa ny andraikitra amin'ny fiadanantsika dia hiala amin'ny ray aman-drenintsika sy ny mpikarakara antsika. Marina izany ary tokony hitranga amin'ny fotoana iray.
Indraindray isika dia afaka mitondra fikarakaran-tena lavitra loatra. Ny tenantsika dia mifantoka tanteraka amin'ny tenantsika.
Fa tsy ny antsika irery ny fiainana. Momba ny zavatra entintsika amin'ny hafa ihany koa izany. Momba ny fandraisantsika anjara izay mandresy ny ain'ny hafa.
Fa raha te hampiasa vola amin'ny hafa dia tsy maintsy esentsintsika hiala amintsika izany. Tsy maintsy mijery ivelany sy ny anatiny isika.
Fiainana mandehandeha ny tena. Midika izany fa misy olona mitahiry ho azy izay tiana zaraina. Fa be ny manodidina. Ampy izay hananantsika izay ilaintsika, sady manolotra amin'ny hafa izay ilainy koa.
5. Ny fandriky ny fisainana dia tsy maintsy mandresy ny tohan-kevitra rehetra.
Zava-dehibe ny fahalalana izay inoanao sy ny antony hinoanao azy. Manana faharesen-dahatra lalina izay mahazaka fanoherana. Tokony ho afaka hamoaka ny hevitsika momba ny olana isan-karazany isika ary hiaro azy ireo amin'ny adihevitra mazava, mahay mandanjalanja ary lojika.
Saingy tsy mila mandresy ny tohan-kevitra rehetra isika.
Tsy mila marina foana isika.
Indraindray isika dia afaka mitanondrika am-pahatsorana amin'ny hafa, nefa tsy mandà ireo zavatra tiantsika. Afaka mihaino tsara ny zavatra inoana sy hevitra ary faharesen-dahatra ny hafa isika.
Azontsika atao koa ny manaiky tsy hanaiky. Azontsika atao ny miaiky fa mety diso isika amin'ny zavatra ifikirantsika mafy. Afaka miaina sy mamela velona isika. Azontsika atao aza ny manandrana mankasitraka ny faharesen-dahatra samihafa ananan'ny hafa sy ny antony itazonany azy ireo.
Afaka mianatra zavatra betsaka ianao amin'ny nihaino amin'ny fifamaliana fa tsy mila mandresy ny ady hevitra. Araka ny nolazain'ny olona iray tamim-pahendrena hoe: 'ny olona resy lahatra amin'ny faniriany dia mitovy hevitra ihany.'
Rehefa miady hevitra ianao amin'ny fikasana handresy ny tohan-kevitra fa tsy hianatra avy amin'ilay adihevitra, dia mahazo toerana iadian-kevitra amin'ny alàlan'ny resaka fifandraisana.
Tsy varotra tena tsara izany.
Sorohy ny fandriky ny fandresena amin'ny tohan-kevitra rehetra. Hanao orinasa mahafinaritra kokoa ianao.
6. Ny fandriky ny fiahiahiana be loatra ny hevitry ny olon-kafa.
Misy fomba fiteny taloha toa izao:
Tsy hanahy be loatra momba ny eritreritry ny olon-kafa momba anay izahay raha mahatsapa fa mahalana ny ataon'izy ireo.
Nilaza izany ary na dia marina aza izany dia mbola miahiahy momba izany ihany isika.
Fa na izany aza tsy maninona ny manahy amin'ny dingana sasany ny hevitry ny olon-kafa momba antsika , lasa olana rehefa entina lavitra loatra. Mety ho lasa fandrika izy io.
Raha hitanao fa lazain'ny olona maromaro fa fomba iray ianao, na manana olana iray ianao, na tokony manova zavatra iray… dia tsara ny dinihina.
Ny antony ilazan'ny olona anao an'io dia mety satria tena olana ianao. Saingy tokony hodinihinao foana ny loharano alohan'ny hanaovana fehin-kevitra hentitra.
Misy fitenenana taloha iray hafa izay efa nieritreretako imbetsaka nandritra ny taona maro:
Raha misy miantso anao hoe boriky, dia aza hadino izany. Raha misy olona miantso boriky anao, dia makà lasely.
Tsy mila miahiahy be loatra amin'ny eritreritry ny olon-kafa momba antsika isika raha tsy hoe be ny olona mieritreritra toy izany. Ary amin'izay ihany raha tena izy io dia tena ratsy na toetra poizina fa mampirehitra jiro izy ireo.
Amin'ireo tranga ireo dia tokony hanao fanombanana matotra manokana isika ary hanao fanovana vitsivitsy.
Raha tsy izany dia fandrika hafa fotsiny ny fiheverana be loatra ny eritreritry ny olon-kafa momba antsika fa tsy hianjera ao anaty.
7. Ny fandriky ny tsy mianatra amin'ny traikefa.
Voalaza fa ny zavatra mampanaintaina kokoa noho ny mianatra avy amin'ny zavatra niainana dia tsy mianatra avy amin'ny zavatra niainana.
Ny traikefa dia tokony ho mpampianatra tsara indrindra ho antsika. Any am-pianarana, ianarantsika aloha ny lesona, dia omena antsika ny fitsapana. Amin'ny fiainana dia nomena antsika ny fitsapana voalohany, avy eo dia mianatra ny lesona isika.
Ny traikefa no fitsapana ianarantsika ireo lesona ireo. Raha manana traikefa isika ary tsy mianatra avy amin'izy ireo - na mandà tsy hianatra avy amin'izy ireo - dia tsy azontsika ny lanjan'ireo traikefa.
Rehefa manana fanandraman-javatra tsy mahafinaritra na maharary na lafo ianao dia manaova fanombanana amin'ny fomba marina sy feno habibiana.
Manontania tena hoe inona no tsy nety nataonao. Ahoana no nahavitanao azy tsara kokoa? Inona avy ireo lesoka azonao nisorohana? Tokony nanomboka teo aloha ve ianao? Tokony hitandrina kokoa ve ianao? Tokony tsy nanandrana an'io mihitsy ve ianao?
Ireo karazana fanontaniana arahin'ny valiny marina ireo dia hanampy anao hianatra lesona sarobidy avy amin'ny zavatra niainanao izay hanompo anao tsara amin'ny ho avy.
Aza miditra amin'ny fandrika tsy mianatra amin'ny zavatra niainanao. Ny fanaovana izany dia ny fandaniam-bola ny iray amin'ireo tombontsoa lehibe indrindra anananao.
8. Ny fandriky ny tsy fahatapahan-kevitra.
Ny iray amin'ireo marika amin'ny maha olon-dehibe dia tonga saina isika fa ny fanapahan-kevitra raisintsika dia mety mivantana na an-kolaka.
Ny fanapahan-kevitra mivantana dia rehefa manapa-kevitra mavitrika ny hifindra amin'ny lafiny iray na amin'ny lafiny hafa isika. Ny fanapahan-kevitra ankolaka dia rehefa manapa-kevitra isika fa tsy manapa-kevitra. Raha lazaina amin'ny teny hafa, isika manapa-kevitra amin'ny alàlan'ny default.
Ka raha misy manontany anao raha te hanana gilasy gilasy ianao dia afaka mamaly amin'ny fomba telo:
'Eny, tiako ny iray, misaotra.' Na, 'Tsia, tsy hikarakara iray aho, misaotra.' Na, 'Fantatrao, tsy afaka manapa-kevitra amin'ny fomba iray na amin'ny lafiny hafa aho.'
Fa mazava ho azy, ny fanapahan-kevitra faharoa sy fahatelo dia miteraka zavatra iray ihany - tsy misy gilasy gilasy.
Mamita-tena isika rehefa mieritreritra fa afaka manapa-kevitra mandritra ny fotoana tsy voafetra ary misoroka ny tsy fahafinaretana sy ny loza mety hitranga amin'ny fanapahan-kevitra. Saingy tsy afaka izahay.
Raha tsy manapa-kevitra ny hanambady ianao na tsia dia manapa-kevitra ankolaka hijanona ho mpitovo. Raha tsy afaka manapa-kevitra ianao na handray asa manokana na tsia dia manapa-kevitra ankolaka tsy handray izany ianao.
Tsy manana ny haitraitra amin'ny fanapahana hevitra fotsiny isika rehefa maniry izany. Ny tsy manapa-kevitra dia ny manapa-kevitra amin'ny zavatra mifanohitra amin'izany. Miezaha koa hanao araka izay fara herinao mba tsy ho voafandriky ny tsy fahatapahan-kevitra. Tsy hanompo anao ny tsy fahatapahan-kevitra.
fotsiny mandray ny fanapahan-kevitra tsara indrindra azonao raisina ary ekeo ny vokany, na tsara na ratsy.
Izany no antony tiako ny tenin'i Amelia Earhart. Hoy izy:
Ny zavatra sarotra indrindra dia ny fanapahan-kevitra hihetsika, ny ambiny kosa dia faharetana fotsiny.
Mandrosoa ary manapa-kevitra. Raha mandray fanapahan-kevitra ratsy ianao dia jereo ny Faha-7.
9. Ny fandriky ny fisainana dia tsy afaka manao n'inona n'inona ianao satria kely fotsiny no azonao atao.
Ny iray amin'ireo fandrika mahazatra indrindra amin'ny fiainana dia ny finoana fa raha tsy afaka manao be dia be isika dia tsy tokony hanao na inona na inona mihitsy. Mety ho filozofia mandringa ity.
Ny tena marina dia, ny ezaka rehetra hataontsika dia mitoetra eo anelanelan'ny aotra sy ny tsy manam-petra. Tsy afaka manao velively isika ny zava-drehetra. Vitantsika anefa izany tsy misy. Ny zavatra hafa rehetra dia latsaka any amin'ny toerana mitohy.
Midika izany fa na ny fihetsika bitika indrindra aza dia afaka mandray anjara amin'ny tanjona. Na ny fihetsika bitika indrindra aza dia mety hitondra fiovana lehibe amin'ny fotoana maharitra.
Tsy mila mihazakazaka marathon ianao hanatsarana ny fahasalamanao. Afaka mandeha an-tongotra isan'andro ianao ary mampihena ny sakafo izay tsy mandray anjara amin'ny fiadananao.
Raha ao ambadiky ny bola 8-bola foana ianao dia manaova fanoloran-tena hitahiry vola amin'ny karama rehetra. Tsy mila manangona $ 10,000 isam-bolana ianao. Atombohy amin'ny $ 25 isam-bolana. 300 $ monja izany ao anatin'ny herintaona, fa mety mihoatra ny tahirinao izao.
Angamba tokony mamaky bebe kokoa ianao. Ka ahoana raha tsy afaka mamaky boky isan-kerinandro ianao, na boky iray aza isam-bolana. Manolora tena hamaky toko 1 isan-kerinandro. Fanombohana izany.
Manorata litera iray. Miantso telefaona iray. Manaova fanovana mahomby iray. Diovy ny arimoara iray. Vakio ny boky iray manan-danja. Tsy azontsika fantarina mialoha izay mety ho entin'ny ezaka kely ataontsika.
Ka manambola amin'ny ezaka kely. Ny kely dia tsara kokoa noho ny tsy misy mihitsy. Aza miditra amin'ny fandriky ny fieritreretana fa tsy mahavita na inona na inona ianao satria kely fotsiny no azonao atao.
Manaova kely. Mety hiteraka fiovana lehibe izany.
10. Ny fandriky ny tsy fitandremana izay tena sarobidy aminao.
Ny tsirairay avy dia tsy maintsy manapa-kevitra samirery ny zavatra tena misy lanja amin'ny fiainana. Zavatra mendrika arovana. Zavatra mendrika hotehirizina. Zavatra mendrika kolokoloina.
Izy rehetra dia an'ny tena manokana. Tsy afaka milaza amiko izay sarobidy amiko ianao. Tsy afaka milaza izay sarobidy aminao aho.
Ny tiana horesahina dia ny fisorohana ny vela-pandrika tsy fanajana izay tena sarobidy HO ANAO!
Atombohy amin'izay heverinao fa misy lanjany lehibe izany. Avy eo dia ataovy izay azonao atao mba hiarovana, hikolokoloana ary hikolokoloana izay mety hisy.
Na ny fanananao ara-nofo. Fifandraisana. Ny fahasalamanao. Ny harenanao. Ny nofinao. Fantaro izay zavatra sarobidy indrindra aminao ary manaova zavatra mifanaraka amin'izany.
Halaviro ny vela-pandrika tsy fankatoavanao ny tena laninao. Fahadisoana lehibe eo amin'ny dia amin'ny fiainana io. Hifarana amin'ny fiezahana mafy hitandrina izay tsy tena sarobidy aminao ianao. Ary ho very ny tena izy.
Ny zavatra sasany amin'ny fiainana dia tsy azo amboarina raha vantany vao tapaka. Ny fotoana tsy manasitrana ny ratra rehetra.
Tsy te ho very ny zavatra ankafizinao indrindra. Aza miditra amin'ity fandrika ity. Aza hadino ny mankamamy ireo zavatra sarobidy indrindra aminao.
11. Ny fandriky ny fandavana ny fanekena fa niova ny toe-javatra.
Voalaza fa ny fanovana ihany no tsy miova. Izay nilaza fa marina izany. Tsy misy mijanona ho toy izany mandrakizay. Tsy olona mitovy akory isika anio hariva tamin'io maraina io.
Mety efa nianatra zavatra vaovao isika. Mety nisy zavatra hadinontsika. Ny sela rehetra ao amin'ny vatantsika dia mihoatra ny iray andro. Ny rafitra rehetra ao amin'ny vatantsika dia mihoatra ny iray andro. Ary rehefa heverinao fa andro sisa sisa niainanay dia andro iray sisa manakaiky ny fahafatesantsika manokana.
Tsy milaza izany ho toy ny marary aho. Ny tiako holazaina dia ny milaza ny marina.
Ny zava-misy dia hiova ny raharaha na hanaiky izany isika na tsia. Hisy fiovana amin'ny alàlan'ny alàlanay alalana na tsia. Ho avy ny fanovana na dia tsy tsikaritray aza izany. Hitohy hisy ny fanovana na dia manameloka azy na manohitra azy aza isika.
Tsy afaka mampiato ny fanovana isika. Tsy misy afaka.
Ka ny tsara indrindra azontsika atao dia ny fanekena ny fanovana.
Azontsika atao ny manaiky am-pahatsorana fa ny zavatra dia tsy mitovy amin'ny taloha. Tsy tanora toy ny taloha intsony isika. Tsy dia matanjaka toy ny taloha intsony isika. Tsy manana angovo mitovy amin'ny nananantsika taloha isika.
Niova ny tombontsoantsika. Hafa ny namantsika. Mety tsy hipetraka amin'ny trano iray, ny tanàna iray, na ny firenena mitovy amin'ny taloha intsony isika.
Tsy ny fiovana rehetra no mitondra fandrosoana. Fa raha tsy misy ny fanovana dia tsy misy fandrosoana mihitsy.
Tokony ho naman'ny fanovana isika. Tokony hahazo aina amin'ny fanekena izay niova isika fa tsy hitaraina amin'ny zavatra tsy azo ihodivirana sy tsy azo aleha.
Ireo izay tsy afaka hanaiky sy hanaiky fanovana dia miaina tsiranoka. Aza latsaka ao anaty fandrika. Na dia tsy faly amin'ny fanovana aza ianao - farafaharatsiny mianatra mianatra azy ho iray amin'ireo tsy azo ifanakalozan-kevitra amin'ny fiainana. Ho tsara kokoa ianao amin'izany.
12. Ny fandriky ny fikatsahana fahalavorariana fa tsy ny fahamboniana.
Fikatsahana tombony ny fanandratana. Tsy izany no tonga lafatra.
Miaraka amin'ny faningana vitsivitsy, tsy azo tanterahina ny fahalavorariana. Afaka manakaiky ianao. Saingy ny fahatanterahana mihitsy dia saika tsy azo atao. Tsy misy dikany firy ny fanenjehana izay tsy tratra.
Fa na dia azo tanterahina aza ny fahalavorariana dia lafo loatra matetika ny vidiny.
Ny fikatsahana fahalavorariana dia mandany fotoana be. Izy io koa dia mandany angovo goavambe. Mandreraka. Amin'ny tranga vitsy dia lavorary ny vidiny na dia mety tratra aza.
Mahalana vao tena ilaina ny tonga lafatra. Mety hieritreritra isika fa izany. Saingy tsy izany.
ahoana no ahafahako manao ny fiainako miaraka
Mazava ho azy, misy ny fotoana irinay fa hahatratra hatrany ny fahalavorariana. Fandidiana ny ati-doha, fametrahana fiaramanidina ara-barotra, fifandraisana, fiterahana, fitsambikinana avy amin'ny fiaramanidina misy parasyute - mba hilazana vitsivitsy fotsiny.
Fa ny ankamaroan'ny zavatra amin'ny fiainana tsy tokony ho lavorary.
Tanjona tsara lavitra noho izany ny fahatsarana. Ho ekena saika isaky ny fotoana ny fahamboniana. Ary ny hatsarana dia saika tratra foana, fa ny fahalavorariana kosa saika tsy misy mihitsy.
Ka safidio ny tsara indrindra. Aza miditra amin'ny fandrika mitady ho tonga lafatra.
13. Ny fandriky ny fiheverana fa fantatsika izay tsy fantatsika.
Mety efa nihaona tamin'ny nanendrena tena ianao ' fantatry ny rehetra ”Amin'ny fiainanao. Olona mampiseho ny tenany ho manam-pahaizana amin'ny lohahevitra rehetra. Afaka mahazo tsara tarehy ry zareo manorisory . Aza tonga iray.
Voalaza fa mitombo avo roa heny isaky ny 13 volana ny fahalalan'olombelona. Ary araka ny filazan'ny IBM, ny fanitarana ny 'internet of zavatra' dia hitarika amin'ny fampitomboana avo roa heny ny fahalalan'olombelona isaky ny 12 ora.
Mieritreritra aho fa afaka miombon-kevitra soa aman-tsara isika fa misy zavatra maro tsy fantatrao. Mitovy amiko. Mitovy amin'ny olombelona hafa rehetra.
Ka rehefa mieritreritra hahalala zavatra ianao dia manaova soa ho an'ny rehetra ary manamafy ny fahalalanao. Hamarino manokana ny zava-misy. Miezaha manasaraka ny tena fahalalana amin'ireo zavatra noraisinao tamin'ny fahazazanao.
Raha jerena ny fitombon'ny fahalalana haingana sy ny hafainganan'ny fiovan'ny antsoina hoe fahalalana dia mety diso ianao.
Farany, tadidio fa na dia fitaovana fahalalana mahery vaika aza ny Internet dia tsy mety diso izany. Tsy hoe rehefa milaza izany eo amin'ny efijeryo dia marina izany.
Aza mieritreritra hoe fantatrao izay tsy tianao. Aza mieritreritra akory hoe fantatrao izay mety tsy fantatrao. Araka ny nolazain'i Ronald Reagan… ”Matokia, fa hamarino.”
14. Ny fandriky ny tsy fandehanana.
Saika ny olon-drehetra dia misy hetsika sasany amin'ny fiainany izay sarotra ny miala. Indraindray isika dia toa tsy afaka mandrindra azy io afa-tsy amin'ny fahafaham-po antsika. Misy fanontaniana tsy azontsika valiana.
Misy ny nenina. Raha tsy nisy izany. Raha mba nisy izany. Manenina amin'ny fotoana. Mangidy amin'ny fomba nitondrana anay. Potika ny fanantenana. Rava ny nofy. Afaka nanohy izahay.
Nefa na dia tsy mila mody milaza zavatra tsy nisy aza isika. Ary tsy tokony handà ny fahatsapantsika azy ireo isika. Tsy misy antony tokony hirotsahantsika ao. Mifikitra amin'izay tsy eo intsony. Na mody hoe hiverina izy.
Isaky ny tapaka isika dia mitombo ny vatan'ny mpiambina ny fibrin izay manarona ilay tavy vao naratra. Antsoinay hoe foza. Ny scab dia miaro ny hoditra amin'ny ratra fanampiny. Izy io koa dia miaro ny hoditra vao miforona amin'ny bakteria.
Ny scabs dia tsy kisendrasendra. Izy ireo dia ny fatorana voajanahary an'ny vatana ary manome tanjona tsara izy ireo. Raha efa nesorinao ny foza dia takatrao ny tanjon'izy ireo. Ny scabs dia avela sisa.
Toy izany koa, rehefa naratra ara-tsaina na ara-pihetseham-po isika dia mila fotoana hanasitranana. Misy karazana fanampiana isan-karazany amin'ny fizotran'ny fanasitranana mitovy amin'ny foto-pisaka.
Afaka manampy ny fotoana. Afaka manampy ny firesahana amin'ny namanao. Ny famakiana ny tantaran'ny olona efa nandalo zavatra niainana mitovy amin'izany dia afaka manampy. Misaintsaina ny zava-nitranga. Mivavaka momba izany. Ny firesahana amin'ny mpitsabo izay mahalala zavatra betsaka momba ny zavatra niainana toy izany dia afaka manampy koa.
Ireo rehetra ireo dia afaka manampy amin'ny fizotran'ny fanasitranana, ary azo ampiasaina na iray na izy rehetra. Nefa ho tanteraka izany amin'ny farany fotoana handrosoana amin'ny fiainanao.
Ny hodi-maso ivelany dia nanatanteraka ny tanjony, nianjera izy, ary ny taolana naratra teo aloha dia sitrana ankehitriny. Mety misy fery tavela any aoriana. Fa ilay ratra mihitsy dia tsy mandreraka intsony. Sitrana izany.
Toy izany koa, aorian'ny fotoana maromaro - ny halavan'ny sarotra vinavinaina - ho sitrana amin'ny trauma ianao ary ho vonona ny handroso.
Mety tsy ho mora izany. Mety mila ny tanjaka rehetra azonao atao ny manao azy. Nefa tsy maintsy ataonao izany. Ary vitanao izany. Fa ianao irery ihany no mahavita azy. Tsy misy mahavita azy ho anao.
Aza latsaka ao anaty fandriky ny tsy handrosoana. Fohy loatra ny fiainana ka mijanona tsy milamina. Avelao ny tenanao ho sitrana.
Ampiasao ny loharanon-karena azonao atao hanamorana ny fizotrany. Fa avelao ny tenanao ho sitrana. Rehefa tonga ny andro handrosoanao… mandrosoa. Aza tratry ny vela-pandrika.
15. Ny fandriky ny fijerena fotoana fohy.
Tsy haingam-pandeha ny fiainana - hazakazaka hazakazaka marathon. Raha efa nihazakazaka marathon ianao dia fantatrao fa mety hampidi-doza ny manomboka haingana loatra. Tsy afaka mahazo marathon fotsiny ianao na manantena ny hahavita marathon amin'ny alalàn'ny tenanao mihitsy aza. Tsy maintsy raisinao miadana izy io ary kely fotsiny isaky ny mandeha.
Ary toy izany koa eo amin'ny fiainana.
Ny fomba handresena amin'ny dian'ny fiainana dia ny fijerena lavitra fa tsy ny fahitana lavitra. Ny zavatra sasany dia mitaky fotoana fotsiny, ary matetika dia tsy maintsy mahafoy ny fahafinaretana haingana ianao amin'ny fifaliana maharitra.
Eo no idiran'ny fifehezana ny sary. Ny mpanoratra Andy Andrews dia manome ny famaritana mazava indrindra ny fifehezan-tena Tonga hatreto aho. Hoy izy:
Ny fifehezan-tena dia ny fahaizana manao ny tenanao hanao zavatra tsy voatery hataonao, hahazoana valiny izay tena tianao hananana.
Tsotra kely, raha ny marina. Ny fifehezan-tena dia fiheverana maharitra fotsiny. Mahatsapa fa raha te hanana izay tena tadiaviko amin'ny ho avy dia tsy maintsy manao sorona aho amin'izao fotoana izao.
Tsy misy olona mahay mifehy tena raha tsy misy valiny. Ny tsy azon'ny olona betsaka momba ny fifehezan-tena dia tsy fahafoizan-tena tsy misy dikany. Izao fotsiny Ny ankehitriny sorona ho an'ny a HOAVY valisoa.
Raha mahay milavo lefona ianao amin'izao fotoana izao noho izay tena tadiavinao amin'ny ho avy, dia ampiharo ny fifehezan-tena ilaina ianao hanatanterahana izany. Raha tsy izany dia tsy hanao izany ianao.
Raha tsy sarobidy ny zavatra tadiavinao dia tsy misy antony tokony hanaovana sorona amin'izany. Fa raha manan-danja ny zavatra tadiavinao, fa mila fahafoizan-tena amin'izao - ataovy izany fahafoizan-tena izany.
ahoana ny fatokisana ny vadinao indray
Raha atao teny hafa, dia raiso ny fomba fijery maharitra. Aza latsaka ao amin'ny fandriky ny fitadiavana fotoana fohy.
16. Ny vela-pandrika tsy ahatsapanao fa mitaky fanovana ny fandrosoana.
Efa nahatsikaritra ve ianao fa tia fandrosoana ny rehetra, saingy zara raha misy olona tia miova?
Ny tadiavinay, hoy i Sydney J. Harris, dia “ny hitovizan'ny zavatra rehetra, saingy hihatsara.”
Ny olana tsy maintsy atrehinay dia ny fanatsarana mila fanovana. Tsy afaka mihatsara ny zava-drehetra raha tsy miova.
Voamarina ihany koa fa tsy dia misy fiovana loatra izay tsy tiantsika - rehefa tsy maintsy miova isika fa mirona tsy mahazo aina isika.
Isika rehetra dia hiova amin'izao tontolo izao. Isika rehetra dia hiova ho an'ny namantsika sy ny mpiara-miasa amintsika. Isika rehetra dia miova ho an'ny fiarahamonina, ny sekoly, ny orinasanay ary ny mpifanila vodirindrina amintsika.
Saingy tsy dia faly izahay manova ny tenantsika.
Tokony hialantsika ny fandriky ny fisainana fa ny fandrosoana dia mety hitranga raha tsy misy ny fanovana. Tsy afaka. Mila fiovana ny fandrosoana. Ary indraindray ny fiovana dia mety hahasosotra, tsy mahafinaritra, na maharary mihitsy aza.
Tsy maintsy tadiavintsika ny fanovana mihoatra ny tiantsika hisorohana ny tsy fankasitrahana, ny tsy mahafinaritra ary ny fanaintainana. Tsy maintsy mifanakalo ny iray isika. Ary ireo zavatra mendrika hotrandrahana sy hananana dia mendrika ny takalo.
Ekenay fa tsy ny fiovana rehetra no miteraka fandrosoana. Fa raha tsy misy ny fanovana dia tsy misy fandrosoana mihitsy.
17. Fandrika tsy fanekena ny olona hoe iza marina izy ireo.
Tena fandrika mahazatra io latsaka io. Tahaka ny fiheveran'ny olona sasany fa notendrena ho an'ny hafa izy Mpanolotsaina manokana ho an'ny Makeover. Tsy azon'izy ireo atao fotsiny ny manaiky ny olona. Mahatsiaro ho voatery hanova azy ireo izy ireo.
Ny antony maha-zava-dehibe izany dia na ho ela na ho haingana, rehefa tsy manao izany ianao ekeo ny olona iray amin'ny tena toetrany , hampanalavitra ny tenany aminao izy ireo.
Tsy misy olona te holavina noho ny maha-izy azy. Tianay ny horaisina - warts sy ny rehetra.
Tsy midika akory izany fa mieritreritra isika fa tonga lafatra na tsy manana lesoka. Na tsy mieritreritra izahay fa misy faritra ilana fanovana. Afaka mihatsara ny tsirairay.
Raha voalaza izany dia te hanana antoka isika fa ireo akaiky antsika dia manaiky antsika amin'ny maha-izy antsika. Manaiky ny maha-izy antsika isika - fa tsy hoe iza no tadiavin'ny hafa.
Mandreraka ny fiezahana ho olona tsy anao. Aza atao izany. Miaraha amin'ny olona izay manaiky anao izao. Nefa fantaro fa ianao, toa azy ireo, dia asa mandroso. Sorohy ny olona izay mahatonga anao hahatsapa ho sarotra ny mitia.
Tsy te-ho tonga ianao TSY ho an'ny tena maha-ianao anao. Te-ho tonga ianao nanaiky ho an'ny tena maha-ianao anao.
Toy izany no tsapan'ny olon-kafa. Ka sorohy ny fandrika tsy fanekena azy ireo. Raha tsy azonao ekena amin'ny tena maha izy azy izy ireo, farafaharatsiny mba manana ny tsy fivadihana hilazana azy ireo izany. Ary afaka misaraka am-pilaminana ianao.
18. Ny fandriky ny tsy fahatsapanao fa misy zavatra kely.
Isaky ny misy sambo mandehandeha any an-dranomasina na fiaramanidina fiaramanidina mivezivezy eny amin'ny lanitra, dia fantatry ny kapiteny fa ny fiviliana kely avy amin'ilay dia afaka mitondra fiovana lehibe amin'ny fotoana sy ny halavirana.
Divergence 1% fotsiny avy amin'ny lalana kasaina hatao dia afaka mampidina ny sambo na ny fiaramanidina amin'ny firenena hafa tanteraka amin'ny halavirana lavitra.
Zava-dehibe ny zavatra kely. Ny zavatra kely dia mety hitondra fiovana lehibe. Ny tsy fahafantarana izany dia fandrika mahafaty tokony hialantsika.
Misy ohatra tsy misy farany azontsika tondroina hanehoana an'io fahamarinana io. Ireto misy vitsivitsy fotsiny:
Ny teny iray ataonao amin'ny namanao dia mety hanimba ny fifandraisanareo.
Ny fifamaliana iray dia mety hiteraka fisarahana eo amin'ny fanambadiana.
Ny tranga iray amin'ny fitsarana ratsy dia mety hampitsahatra ny asany.
Ny fahalemena iray monja dia afaka manimba fiainana.
Ny tsy fanoloana ny satroka crankcase aorian'ny fanovana solika dia mety hiteraka maotera fiara nogadraina sy simba.
Ny lesoka iray dia mety hahavery ny lalao baseball, ny playoff, na ny World Series aza. Tena nitranga izany.
Tokony hekentsika koa fa ny fanaovana zavatra kely tsara fotsiny dia afaka mitondra fiovana lehibe.
Ny fihetsika kely maneho hatsaram-panahy dia afaka manazava ny andron'ny olona iray. Ny fihetsika kely feno herim-po dia afaka manampy amin'ny fandresena ny tahotra.
Zava-dehibe ny zavatra kely. Ny zavatra kely dia mety hitondra fiovana lehibe. Zareo dia manana. Manao izany izy ireo. Ary hanao izany izy ireo. Aza tratry ny vela-pandrika tsy hahatsapanao azy.
19. Ny vela-pandrika tsy fanekena ny hahatongavana amin'ny tanjona lehibe dia mila fifantohana.
Manelingelina nofy ny fanelingelenana. Ny fahaverezan'ny fifantohana dia mety hahatonga antsika tsy hahita làlana. Tsy misy zava-bita lehibe azo tanterahina raha tsy mifantoka.
Raha ny marina, ny fifantohana dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra amin'ny karazana zava-bita. Ny fahaverezan'ny fifantohana dia ny famoahana ny tena ho amin'ny tsy fahombiazana.
Ny fifantohana dia manampy antsika hitarika ny herintsika. Ny fifantohana dia manampy antsika hijanona amin'ny lahasa mandra-pahavitany. Ny fifantohana dia manampy antsika tsy ho voasakana amin'ny safidy mifaninana. Manampy amin'ny famokarana ny asantsika ny fifantohana. Manentana antsika ny fifantohana satria mamela antsika hahita vokatra izany.
Ny sekreteram-panjakana amerikanina teo aloha, John Foster Dulles dia nilaza hoe:
Ny zava-bitan'ny lehilahy amin'ny fiainana dia ny vokatry ny fitadiavany ny antsipiriany.
Ity dia fanambarana momba ny fifantohana. Ny fifantohana dia ahafahantsika mirona amin'ny antsipiriany izay mahatonga ny fahasamihafana rehetra amin'ny valiny.
Hoy i Aristotle:
Isika no ataontsika miverimberina. Ny fiheverana tsara amin'izay dia tsy fihetsika fa fahazarana.
Ny fahazarana dia noforonina tamin'ny fihetsika miverimberina. Mila mifantoka ireo fihetsika ireo. Izany dia mahatonga ny fifantohana ho singa lehibe amin'ny hatsarana.
Bill Gates, mpanorina ny Microsoft nilaza hoe:
Ny fahombiazako, ampahany amin'izany azo antoka, dia nifantoka tamin'ny zavatra vitsivitsy aho.
Mba hahatratrarana tanjona lehibe, ilaina ny fifantohana .
20. Ny fandriky ny tsy fahatsapantsika fa mijinja izay afafintsika isika.
Ny iray amin'ireo zava-misy tsy miovaova indrindra eo amin'izao rehetra izao dia ilay antsoina indraindray Ny lalànan'ny fijinjana.
Ny hevitra hoe izay hambolen'ny tantsaha amin'ny lohataona dia izay hojinjain'ny tantsaha amin'ny fararano. Voavoly ny katsaka - jinjaina ny katsaka. Mamafy varimbazaha - jinjaina ny varimbazaha.
Tsy mamboly voa paoma izahay ary manantena ny hisian'ny zavamaniry voatabia. Tsy mamboly tsaramaso soja izahay ary mitady voatavo hiseho. Misy ny tsy fitoviana eo amin'ny natiora. Ny voa dia mamokatra araka ny karazany avy.
Fa io lalàna io ihany koa dia misy eo amin'ny sehatry ny olombelona ihany koa. Rehefa mamafy eritreritra sy fiasa sasany isika dia mijinja izay nafafintsika.
Mety tsy anio. Na rahampitso. Na amin'ny volana manaraka. Na amin'ny herintaona. Na ho ela na ho haingana dia ho tonga akoho akoho ny akoho.
Mijinja izay nafafintsika isika. Indraindray isika dia mahavita mandositra ny fijinjana izay tokony ho tonga. Saingy tsy izany no mitranga matetika. Ny ataontsika ankehitriny dia manana fomba hahitana antsika.
Tsy izay mifoka sigara 2 fonosana isan'andro no ho voan'ny homamiadana - fa maro kosa no hanana. Ary tsy tokony hahagaga izany.
Tsy izay rehetra mangalatra amin'ny mpampiasa azy no tratra - fa maro no tratra. Ary tsy tokony hahagaga izany.
Tsy izay kamo kamo no tsy hanana kariera milamina sy fiainana ara-bola - fa maro kosa no hanana. Ary tsy tokony hahagaga izany.
Tsy izay rehetra manisy ratsy ny sakaizany no ho very sakaizany, fa maro kosa no hanao izany. Ary tsy tokony hahagaga izany.
Tokony hieritreritra isika fa izay ataontsika amin'izao fotoana izao dia hisy fiantraikany amin'ny hoavintsika. Na dia misy faningana tsy fahita firy aza dia tsy tokony hiantehitra amin'izany isika.
Tokony hialantsika ny fandrika tsy hahatonga antsika tsy hahatsapa fa hijinja izay nafafintsika isika matetika.
Voafandrika ao anaty fandrika fiainana ve ianao ary te hiala? Miresaha amin'ny mpanazatra fiainana anio izay afaka mitarika anao mandritra ny fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Zavatra 8 Ny ankamaroan'ny olona mandray fiainana iray hianarana
Ahoana ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny fiainanao rehefa tonga ny kodiarana
10 amin'ireo tononkalo tsara indrindra momba ny fiainana
Ahoana no hanovana ny fiainanao ho tsara kokoa: Ireo làlana 2 azonao zahana
maninona ny narcissist no manandrana mandratra anao
ahoana no ahalalanao fa tsara tarehy ianao
zavatra hosoratana amin'ny taratasim-pitiavana
ny fomba hahatonga ny tovovavy hino fa tsara tarehy izy
brock lesnar sy paul heyman
te hanafina ny fiarahanay ny sipako